Emọs 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
8 Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova mere ka m hụ, lee! e nwere otu nkata mkpụrụ osisi nke mịrị n’oge okpomọkụ.+
2 O wee sị: “Emọs, gịnị ka ị na-ahụ?”+ M wee sị: “Ọ bụ nkata mkpụrụ osisi nke mịrị n’oge okpomọkụ.”+ Jehova wee gaa n’ihu ịgwa m, sị: “Ọgwụgwụ nke ndị m Izrel eruola.+ Agakwaghị m ahapụ ha.+
3 ‘Abụ a na-abụ n’ụlọ nsọ ga-abụ iti mkpu ákwá n’ụbọchị ahụ,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. ‘Ozu ga-ejupụta ebe niile.+ A ga-atụsasị ha n’ebe niile—unu ekwula okwu!’
4 “Nụrụnụ ihe a, unu ndị na-anwa iji ọnụ kpụrụ ụmụ ogbenye,+ iji mee ka a gharakwa inwe ndị dị umeala n’obi n’ụwa,+
5 ndị na-asị, ‘Olee mgbe ụbọchị ememme ọnwa ọhụrụ ga-agafekwanụ+ ka anyị ree ọka?*+ Oleekwa mgbe ụbọchị izu ike+ ga-agafe ka anyị bupụta ọka ree; ka anyị wee mee ka ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa dị ntakịrị,+ meekwa ka ihe ọ̀tụ̀tụ̀ shekel buo ibu, jirikwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ aghụghọ ghọgbuo ndị mmadụ;+
6 ka anyị wee jiri ọlaọcha efu zụrụ ụmụ ogbenye, zụrụkwa nwa ogbenye n’ọnụ ahịa akpụkpọ ụkwụ, ka anyị wee ree ọka nke na-abụghị ezigbo ya?’+
7 “Jehova ejiriwo Ebube Jekọb ṅụọ iyi,+ sị, ‘Ọ dịghị mgbe m ga-echezọ ọrụ ha niile.+
8 Ọ́ bụghị n’ihi nke a ka ala ga-ama jijiji,+ meekwa ka onye ọ bụla bi n’ime ya ruo uju?+ Ọ́ bụghịkwa n’ihi nke a ka ọ ga-eto dị ka osimiri Naịl, maliekwa elu ma talata dị ka osimiri Naịl nke Ijipt?’+
9 “‘Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ,’ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘na m ga-eme ka anyanwụ daa n’etiti ehihie,+ m ga-emekwa ka ọchịchịrị gbaa n’ala a n’ụbọchị ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ.
10 M ga-emekwa ka ememme unu niile ghọọ iru uju,+ meekwa ka abụ unu niile ghọọ abụ iru uju, m ga-emekwa ka mmadụ niile kee ákwà iru uju n’úkwù, meekwa ka isi mmadụ niile kwọchaa;+ m ga-emekwa ka ihe dịrị ka mgbe a na-eruru nwa nwoke a mụrụ naanị ya uju.+ Ihe ga-esikwa n’ime ya pụta ga-adị ka ọ̀ bụ n’ụbọchị dị ilu.’
11 “‘Lee! Ụbọchị na-abịa,’ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘mgbe m ga-eme ka e nwee ụnwụ n’ala a, ma ọ bụghị ụnwụ nri, meekwa ka e nwee akpịrị ịkpọ nkụ, ma ọ bụghị nke mmiri, kama ọ bụ nke ịnụ okwu Jehova.+
12 Ha ga na-adagharị site n’oké osimiri ruo n’oké osimiri, sitekwa n’ebe ugwu ruo n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ha ga na-awagharị na-achọ okwu Jehova, ma ha agaghị achọta ya.+
13 N’ụbọchị ahụ, ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ́ ndị mara mma, ga-atụbọ, tinyere ụmụ okorobịa, n’ihi akpịrị ịkpọ nkụ;+
14 ya bụ, ndị ji ikpe ọmụma Sameria na-aṅụ iyi,+ ndị na-asị: “Dị nnọọ ka chi gị dị ndụ, gị Dan!”+ ndị na-asịkwa, “Dị nnọọ ka ụzọ Bia-shiba+ na-adịgide adịgide!” Ha ga-ada, ha agaghị ebili ọzọ.’”+